कथित ‘धर्ती माता’को काण्ड सेलाउन नपाउँदै भक्तपुरमा पनि त्यस्तै ठूलो काण्ड – All top Here
Home/समाचार/कथित ‘धर्ती माता’को काण्ड सेलाउन नपाउँदै भक्तपुरमा पनि त्यस्तै ठूलो काण्ड
काठमाडौं, १९ असार । काठमाडौंको भद्रकाली मन्दिरमा बसेर कथित ‘धर्ती माता’को नाममा ठगी र महिलालाई यातना दिएको काण्ड सेलाउन नपाउँदै भक्तपुर जिल्लामा पनि त्यस्तै खालको अर्को ठूलो ठगी काण्ड बाहिर आएको छ ।भक्तपुरको सल्लाघारी नजिकै कटुञ्जेस्थित ‘दैवी स्थान सत्या शक्ति’का नाममा स्थानीय एक महिलाले वर्षौंदेखि सर्वसाधारणहरूलाई ठगी गर्दै आएको खुलासा भएको हो । आफूलाई ‘भगवान’ भन्न रुचाउने ती महिलाले आफूलाई अरु शब्दावलीले सम्बोधन गर्दा रिसाउँछिन् । आफ्ना सहयोगीहरूमाफर्त भेट्न आउनेहरूलाई ‘भगवान’ भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी शुरूमा सिकाइन्छ ।ती महिलाले आफूलाई ‘भगवान’को संज्ञा दिँदै भेट्न आउनेहरूका सबै पीडा र समस्या समाधान गर्ने दाबी गर्छिन् । भक्तहरूको मनोकांक्षा कति पूरा भयो वा भएन पुष्टि नभएपनि भेट्न आउने भक्तहरूको गोजी रित्तिएका भने प्रसस्त उदाहरण भेटिएका छन् ।आश्रमको मूल गेटमा स्वयं सेवकहरूद्वारा कडा चेक जाँच गरेर भक्तहरूलाई भित्र पठाउँदै कथित माता अर्थात भगवानलाई भेट्न निःशुल्क पाइँदैन । गेटबाट भित्र निःशुल्क छिराइएपनि भित्र पुगेपछि निश्चित शुल्क लिएर मात्रै कथित ‘भगवान’सँग भेट्न दिइन्छ । तैपनि ती भगवान पर्दाभित्रबाट मात्रै बोल्छिन् । बाहिर आफ्नो अनुहार देखाउँदिनन् ।उनले भेट्न आउने भक्तहरूलाई सबै कुरा पु-याइदिने भनेर आश्वासन दिने गरेकी छिन् । कथित भगवान बताउने ती महिला कहिल्यै पनि सार्वजनिक हुँदैनिन् । भएकी पनि छैनन् ।कथित ‘भागवन’को नाममा काण्ड मच्चाउँदै आएकी उनको वास्तविक नाम खुल्न सकेको छैन । उनलाई चिन्ने स्थानीयहरू कथित भगवानको आश्रममा जाँदैनन् । उनलाई भेट्न जाने भनेका नचिनेका र नबुझेका तथा बाहिरी जिल्लाबाट आएका व्यक्तिहरू मात्रै रहेका हुन्छन् । कथित भगवानको ठगी धन्दाका समाचारहरू बाहिर आउन थालेपछि उनको व्यापार पछिल्लो समय ओरालो लागेको छ ।
बुधबार दैनिक नेपालका प्रतिनिधि कथित भगवानको आश्रममा जाँदा ५०–६० जना मात्रै देखिएका थिए । जबकी कथित भगवानको आश्रममा बुधबार र शनिबार विशेष मेला लाग्ने गर्छ ।कथित ‘भगवान’ अर्थात माताको आश्रमभित्र जो कसैलाई प्रवेश सहज छैन । मूल गेटमा हरियो कपडा लगाएका व्यक्तिहरू राखिएका छन् । ती व्यक्तिहरूले जो पायो त्यसलाई प्रवेश गर्न दिँदैनन् । जानेबुझेका र आफूहरूको ठगी धन्दामा असर पु-याउने खालका व्यक्तिलाई कुनैपनि हालतमा प्रवेश दिइँदैन । दैनिक नेपालले ती महिला जसले आफूलाई भगवान भन्न रुचाउँछिन् उनका बारेमा थुप्रै काण्डहरू फेला पारेको छ ।धर्मका नाममा १५–२० वर्षदेखि लुट मच्चाउँदै आएकी ती महिला अर्थात भगवानले किन आफूलाई सार्वजनिक गर्न चाहँदैनिन् रहस्यको विषय बनेको छ ।ती महिलाको आफ्नै परिवार पनि छ । ज्यापु समुदायकी ती महिला कुनै बेला सोही ठाउँमा चियाप पल गर्ने गर्थिन् । स्वर्गबास भइसकेका उनका पतिले साइकलको टायर पञ्चर मर्मत गर्ने पसल चलाउँथे । ती महिला अर्थात ‘भगवान’ र परिवारका अन्य सदस्यहरू चिनजानेका स्थानीयहरूसँग बोल्दैनन् ।त्यति मात्रै होइन आश्रममा पूजा गर्ने सामाग्रीहरू बाहिर आसपासका पसलबाट भित्र लैजान दिइँदैन । आश्रमभित्रै कपडा, फूल आदिको व्यापार गर्ने गरिएको छ । ती महिलाको दर्शनका लागि न्यूनतम १ सय ५० देशि २ लाखसम्म लिने गरिएको एकजना भक्तले बताएका छन् ।दर्शन गर्न आउने भक्तको पैसाले किनिएको आलिसान भवन । यही
भवनभित्र हुन्छ धर्मका नाममा ठगी ।आश्रम र ती महिला अर्थात ‘भगवान’का बारेमा जानकारी माग्दा गेटमा बसेका स्वयं सेवकहरूले कुनै जानकारी दिन मानेन् । राज्यलाई समेत कुनै कर नतिरेर लुट मच्चाइरहेको यस विषयमा भक्तपुर प्रहरी मौन छ । कतिपयले ती महिलाले प्रहरी प्रशासनसँग सेटिङ मिलाएर धर्मका नाममा लुट मच्चार ठगी धन्दा गर्दै आएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् ।देशका विभिन्न स्थानमा धर्मका आडमा ठगी धन्दा मौलाइरहेका बेला भक्तपुरमै यति ठूलो काण्ड हुँदासमेत प्रहरी प्रशासन मौन बस्नुलाई धेरैले आश्चर्यका रुपमा लिएका छन् ।ती महिला अर्थात कथित ‘भगवान’को ठगी धन्दाका बारेमा भक्तपुर प्रहरीका प्रवक्ता एवम् डिएसपी रेवतीरमण पोखरेलले कुनै जानकारी नरहेकाे बताए । उनले जिल्लाभित्र हुने कुनै पनि ठगी वा आपराधिक घटना हुन नदिने बताउँदै ठगी गरेकाे सूचना पाएमा छुट नदिने चेतावनी दिए ।उहाँको बारेमा ठगीको उजुरी आएको छैन । उजुरी आयो भने छानविन गरेर कारबाही हुन्छ’, उनले भने, ‘उहाँका गतिविधिलाई पक्कै पनि प्रहरीले निगरानी गरेको छ । तर, कसैको आस्था र धर्ममाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दैन । धर्मका नाममा ठगी भयो भने चुप लागेर बस्ने कुरा रहँदैन ।’(कथित ‘भगवान’ ती महिलाले आफ्नै पतिलाई किन बचाउन सकिनन् । ती महिला को हुन् ? कसले संरक्षण गरेको छ ? आदि विषयमा अर्को अकंमा जानकारी दिने छौँ ।)